Famantarana ny kalitaon'ny rano - BALLYA
Ny rano no loharanon'ny fiainana, ary ny kalitaon'ny rano fisotro dia mifandray akaiky amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Ny fepetra momba ny kalitaon'ny rano amin'ny fizotry ny famokarana sakafo dia henjana kokoa, fanaraha-maso ny loharano ary fanafoanana ny fandotoana.
BALLYA - Fitsapana rano mety amin'ny rano maro karazana: rano fisotro, famatsian-drano faharoa, rano fantsakana, rano ambanin'ny tany, rano mineraly voajanahary, maloto ao an-trano, rano indostrialy.
Kolontsaina antonony ho an'ny rano
Coliform sy colotra thermotolerant
E. Mediana kolontsaina Coli
Streptococcus Faecium Kolontsaina Medium
P. Aeruginosa Kolontsaina Medium
Vonona ho ampiasaina, valiny vantany vao 24 ± 2ora
Mora ampiasaina ary manome valiny marina, mahomby ary azo antoka
Ny fanafoanana ireo dingana maloto amin'ny fanomanana haino aman-jery, fanamorana, ny fahononam-po
Rano fisotro any ambanivohitra
Rano fisintahana monisipaly (fitsaboana rano, loharano, famatsian-drano faharoa)
Milomano sy SPA
Famatsian-drano sy fanaraha-maso itsinjaram-pahefana
Indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana
Vatan'ny rano tontolo iainana (rano ambonin'ny rano, rano ambanin'ny tany, ranomasina, fiompiana anaty rano, rano anaty rano, rano anaty rano)
Fanariana maloto (maloto ao an-trano, maloto elektrika)
Fitsaboana rano amin'ny indostrialy (rano mangatsiaka, rano mikoriana mihena, rano tsy misy fanapoizinana, fitsapana mikraoba)
Fisotroana (rano mineraly voajanahary, rano voadio tavoahangy, rano voafehy vy sy manganese, fikarohana rano loharano rano, fitsapana vokatra vita amin'ny ronono)
Sakafo (rano fanodinana sakafo, rano fanadiovana voankazo sy legioma)
Fambolena sy famonoana zavamaniry
Momba ny kalitaon'ny rano
Famaritana ny kalitaon'ny rano
Ny kalitaon'ny rano
Izy io dia manamarika ireo toetra ara-batana (toy ny loko, ny turbidity, ny fofona sns.), Ny simia (ao anatiny ny zavatra tsy organika sy organika), ary ny zavamananaina (bakteria, zavamiaina bitika dia bitika, plankton, zavamananaina benthic) sy ny endriny.
Ny kalitaon'ny rano Mba ahafahana manombatombana ny kalitaon'ny rano ao anaty rano dia voafaritra ny fari-pahaizana momba ny kalitaon'ny rano sy ny fenitry ny kalitaon'ny rano. Toy ny fenitry ny kalitaon'ny rano fisotro any an-toerana, ny rano indostrialy ary ny kalitaon'ny rano fanjonoana.
Fenitra momba ny kalitaon'ny rano
Ny fenitry ny kalitaon'ny rano dia mamaritra ny fatran'ny loto sy ny zavatra hafa azo avela amin'ny rano. Raha ny karazan-karazan-drano dia azo zaraina ho fari-pahaizana momba ny kalitaon'ny rano ambanin'ny tany, ny fenitry ny kalitaon'ny ranomasina ary ny fenitry ny kalitaon'ny rano anaty; arakaraky ny fampiasana loharanon-drano dia azo zaraina amin'ny fenitry ny kalitaon'ny rano fisotro, fenitra momba ny kalitaon'ny rano fanjonoana, fenitra momba ny kalitaon'ny rano fambolena, fenitra momba ny kalitaon'ny rano fialamboly ary fenitra momba ny kalitaon'ny rano indostrialy. Noho ny tanjona samihafa, ny habaka fampiharana sy ny takiana amin'ny fenitra isan-karazany, ny sanda fenon'ny polotantant mitovy amin'ny fenitra samihafa dia hafa ihany koa.
Tatitra momba ny kalitaon'ny rano
Masontsivana momba ny kalitaon'ny rano
Ny mari-pahaizana momba ny kalitaon'ny rano dia mari-pamantarana mampiavaka ny akora isan-karazany ao anaty rano izay ampiasaina hanondroana ny kalitaon'ny tontolon'ny rano (vatana rano), ny haben'ny fiovana ary ny fironana amin'ny fanovana.
Izy io dia fanehoana ny toetra mampiavaka ny santionan'ny rano. Izy io dia ampiasaina hanondroana ny halehiben'ny mazava sy ny fihoaran'ny rano. Iray amin'ireo famantarana lehibe indrindra handrefesana ny kalitaon'ny rano tsara. Fototra lehibe ho an'ny satan'ny teknika. Ny fihenan'ny fikorontanana dia midika fa mihena ny atin'ny zavatra biolojika, bakteria, viriosy ary zavamiaina bitika hafa ao amin'ny vatana rano, izay tsy afaka manatsara ny fiantraikan'ny famonoana volo sy fanamorana fotsiny ihany, fa mampihena ny habetsaky ny zavamananaina halogenated ihany koa.
2. Fofona sy fofona:
Ny famokarana fofona rano dia vokatry ny fisian'ny zavatra biolojika, izay mety vokatry ny fiakaran'ny biolojika na ny fandotoan'ny indostria. Ny fiovana amin'ny fofona ara-dalàna ny famatsian-drano ampahibemaso dia mety ho mariky ny fiovana amin'ny kalitaon'ny rano manta na ny tsy fahampian'ny fitsaboana rano.
3. Klôria sisa:
Ny klôro tafavoaka dia manondro ny habetsahan'ny klôro mitoetra ao anaty rano aorian'ny fipoahan'ny klôro mandritra ny fotoana iray. Ny fananana fahaizan'ny sterilization mitohy ao anaty rano dia mety hisorohana ny fandotoan-tena ny fantsom-pamatsian-drano sy hiantohana ny kalitaon'ny famatsian-drano.
4. Fitakiana oksizenina simika:
Manondro ny habetsan'ny ôksizenina takin'ny oxidants simika hanefena amin'ny otrikaina ao anaty rano. Arakaraka ny maha-avo ny fanjifana oksizenina simika no mihamaro ny loto ao anaty rano. Ny fandotoana biolojika ao anaty rano dia mivoaka avy amin'ny famoahana ireo maloto ao an-trano na rano maloto indostrialy, ary ireo biby sy zavamaniry simba sy lo kosa dia mikoriana mankamin'ny vatan'ny rano.
5. Ny totalin'ny bakteria:
Ny bakteria voarakitra anaty rano, avy amin'ny rivotra, ny tany, ny loto, ny fako ary ny fatin'ny biby sy ny zavamaniry, ny karazana bakteria ao anaty rano dia samy hafa, ao anatin'izany ny bakteria pathogenika. Ny fenitra amin'ny rano fisotro any Chine dia ny habetsaky ny bakteria ao anaty rano 1ml dia tsy mihoatra ny 100.
6. Vondrona coliform total:
Izy io dia bakteria mpanondro ny fahalotoan'ny tahi, ary ny toe-javatra hita avy aminy dia afaka manondro raha misy fahalotoan-tsoaka ao anaty rano sy ny haavon'ny fahalotoany. Amin'ny dingan'ny fanadiovana rano, aorian'ny fitsaboana ny famonoana otrikaretina, raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fenitry ny rano fisotro ny totalin'ny coliform index dia midika izany fa misy bakteria pathogenika hafa koa novonoina tamin'ny ankapobeny. Ny fenitra dia tsy mihoatra ny 3 / L amin'ny fitsapana.
7. Vondrona coliform mahazaka hafanana:
Izy io dia taratra akaiky kokoa ny haavon'ny sakafo sy ny fahalotoan'ny olona sy ny biby noho ny vondrona coliform, izay bakteria mpanondro ihany koa amin'ny fahalotoan'ny taolan'ny rano.
E. coli dia bakteria solontenan'ny karazana Escherichia. Amin'ny ankapobeny dia tsy pathogenika izy io, fa bakteria monina ao amin'ny tsinain'ny olona sy ny biby, izay mety hiteraka aretin-tsinay fanampiny amin'ny fepetra sasany. Ny karazana serotika sasany dia tena pathogenika ary miteraka fivalanana, izay antsoina hoe E. coli pathogenic. Enterobacteriaceae dia vondrona bakteria G izay manana toetra biolojika mitovy amin'izany, indrindra ao amin'ny tsinain'ny olona sy ny biby. Iray amin'izany ny Escherichia, ao anatin'izany ny karazana bakteria maro. Escherichia coli no be pitsaboana indrindra. E. coli, fantatra amin'ny anarana hoe E. coli, dia katsentsitra ara-dalàna ao amin'ny tsinay lehibe amin'ny biby mampinono rehetra. Amin'ny lafiny iray, dia afaka mamolavola vitamina B sy K ho an'ny fandraisana sy ny fampiasana ny vatana. Etsy ankilany, afaka manakana ny fihanaky be ny bakteria manimba sy ny bakteria pathogenika ary ny holatra. Fa rehefa avelany ny ampahany katsentsitra amin'ny tsinay ary miditra amin'ny faritra hafa amin'ny vatana dia mety hiteraka aretina izy ireo. Ny karazana bakteria sasany dia pathogenika ary miteraka tsinay na tsinay na lalan-dra.
Olana misy kalitaon'ny rano
Ny fandotoana rano dia mitranga rehefa mandoto ny renirano, renirano, farihy, ranomasina, anaty rano na rano hafa, ny loto manimba (matetika ny akora simika na zavamiaina bitika), manimba ny kalitaon'ny rano ary manapoizina ny olona na ny tontolo iainana.
Ny rano dia mora tohin'ny fandotoana. Ny rano, fantatra amin'ny anarana hoe "solvent universal," dia mamoaka zavatra betsaka kokoa noho ny ranoka hafa eto ambonin'ny planeta. Izany no antony ananantsika Kool-Aid sy riandrano manga mahafinaritra. Izany no mahatonga ny rano ho voaloto mora foana. Mora simba sy mifangaro amin'izy ireo ny zavatra manapoizina avy amin'ny toeram-pambolena sy tanàn-dehibe ary orinasa ka miteraka fandotoana rano.
Loza ateraky ny rano
Ireo otrikaretina entin'ny rano amin'ny endrika bakteria pathogenika ary ny viriosy avy amin'ny fako ataon'ny olombelona sy ny biby no tena mahatonga ny fahalotoan'ny rano fisotro. Ny aretina ampitain'ny rano tsy azo antoka dia misy ny kôlera, Giardia ary typhoid. Na any amin'ny firenena manankarena aza, ny famoahana ireo fotodrafitrasa fanadiovana maloto sy tsy fanarahan-dalàna avy amin'ny toeram-pambolena sy ny tanàn-dehibe dia mety hiteraka otrikaretina manimba ny lalan-drano.
Fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano
Ny sampan-draharaha misahana ny fanaraha-maso ny rano ambanin'ny tany amin'ny toerana maro dia hametraka teboka fanaraha-maso any amin'ny faritra ambanin'ny tany amin'ny sokajin-kalitao isan-karazany amin'ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny rano, ary ny faharetan'ny fanaraha-maso dia tsy latsaky ny in-droa isan-taona (vanim-potoana avo sy maina).
Ireo entana fanaraha-maso dia: PH, COD, BOD, SS, nitrône amôniôma, nitrate, nitrite, phenol miovaova, cyanide, arsenic, mercury, chromium (hexavalent), hamafin-tsoaka, plastika, cadmium, vy, Manganese, solo-dronono feno , index permanganate, sulfates, chlorides, coliforms, ary zavatra hafa maneho ny olana lehibe amin'ny kalitaon'ny rano any amin'ny faritra.
Ahoana no refesina ny kalitaon'ny rano ao an-trano?
Fenoy rano iray vera amin'ny vera misy mangarahara avo ny vera iray, ary jereo raha misy zavatra miafina mihantona ao anaty rano manohitra ny jiro? Avelao izy hijoro mandritra ny telo ora, ary avy eo jereo raha misy sediment ao ambanin'ny kaopy? Raha misy, ny loto mihantona ao anaty rano dia nihoatra ny fenitra.
Makà vera araka izay azo atao lavitra avy amin'ny paompy ary makà rano iray vera, avy eo fofona amin'ny oronao izany. Misy fofona solifotsy (klôro)? Raha azonao ny fofona ny vovoka mandro (klôro) dia midika izany fa mihoatra ny fenitra ny hlorine sisa tavela ao anaty rano.
Misotroa rano mangotraka mafana, na misy fofon-tsiranoka (klôro) na tsia. Raha afaka mamofona ny fofon-tsiranoka (klôro ianao) dia midika izany fa mihoatra ny fenitra ny kôlôlôma sisa tavela ao anaty rano! Tsy maintsy mampiasa mpanadio rano amin'ny fitsaboana amin'ny terminal ihany koa ianao.
Manaova dite amin'ny rano paompy ary jereo raha lasa mainty ilay dite rehefa avy alina? Raha lasa mainty ny dite dia midika izany fa tafahoatra ny vy sy ny manganese voarakitra ao anaty rano avy amin'ny paompy, ary ny mpanadio rano miaraka amin'ny singa sivana amin'ny fanesorana vy sy manganese dia tokony hampiasaina amin'ny fitsaboana amin'ny terminal;
Mahatsapa astringent ve rehefa manandrana rano tsotra? Raha izany dia avo loatra ny hamafin'ny rano.
Zahao ao an-trano ny heater-drano sy ny vilany. Misy sosona loto mavo amin'ny rindrina anatiny? Raha misy dia manondro ihany koa fa ny hamafin'ny rano dia avo loatra (avo loatra ny atin'ny kalsioma sy ny magnesium), ary ny fitsaboana fanalefahana dia tokony hampiasaina haingana araka izay tratra! Fanamarihana: Ny rano amin'ny hamafin'ny fihoaram-pefy tafahoatra dia mety hiteraka fantsona fantsom-pivoahan'ny rano sy vaky noho ny tsy fifanakalozan'ny hafanana; rano fisotro amin'ny hamafin'ny fihoaram-pefy tafahoatra mandritra ny fotoana maharitra dia mety hitarika amin'ny vato isan-karazany.
Fitsapana ny kalitaon'ny rano
Miaraka amin'ny fivoarana ara-tsosialy sy toekarena, fandrosoana ara-tsiansa ary fanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​nitombo hatrany ny takian'ny olona amin'ny kalitaon'ny rano fisotro, ary ny fenitra momba ny kalitaon'ny rano fisotro dia nitombo sy nihatsara mifanaraka amin'izany. Satria ny famolavolana ny fenitry ny kalitaon'ny rano fisotro dia mifandraika amin'ny lafin-javatra maro toy ny fombam-piainan'ny olona, ​​ny kolontsaina, ny toe-karena, ny fivoarana siantifika sy ny teknolojia, ny loharanon'ny rano ary ny satan'ny kalitaon'ny rano, tsy eo anelanelan'ny firenena ihany, fa koa eo amin'ireo faritra samihafa ao amin'ny firenena iray ihany, Misy fahasamihafana amin'ny takiana amin'ny kalitaon'ny rano fisotro.
Kitapo fitsapana kalitaon'ny rano
Mihamaro hatrany ny fitsapana kalitaon'ny rano ampiasaina mifanaraka amin'ny toe-pirenena.
Ny kalitaon'ny rano dia mifandray akaiky amin'ny fiainantsika sy ny fahasalamantsika ara-batana. Ny fiantohana ny kalitaon'ny rano dia fiantohana ny aintsika. Ny vidin'ny mpikaroka kalitaon'ny rano matihanina dia mety tsy zakan'ny olon-tsotra. Noho io antony io, ny kalitaon'ny rano kitapo fitsapana trano tsy miankina novolavolain'i Ballya dia mifanaraka amin'ny fahazaran'ny ankamaroan'ny fianakaviana tsotra. Ireo fitaovana detection ireo dia tsy mora ampiasaina fotsiny, fa koa manana fotoana fohy hahitana sy valim-pikarohana tsara.